NextMapping | W तरीका नेताहरू आफ्ना मजदुरहरूलाई तीब्र अनिश्चितताको फलिफाप गर्न सहयोग गर्न सक्छन्
त्यहाँ ways तरीकाहरू छन् जुन नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई गहन अनिश्चितताको समयमा फल्न फूल्न सहयोग गर्न सक्दछन्।
हालसालै एउटा ग्राहकले साझेदारी गरिन् कि उनी आफ्नो टोलीका सदस्यहरूलाई व्यस्त राख्न संघर्ष गर्दै थिए। उनले यो पनि साझा गरे कि उनका कामदारहरूलाई ध्यान केन्द्रित रहन र उत्पादकको साथ चुनौती दिइयो।
महामारीले सिर्जना गरेको अराजकता, अवरोध र परिवर्तन सबै सफलतापूर्वक व्यवहार गर्नका लागि कुनै प्लेबुक छैन।
जहाँसम्म हामी 'मान्छे' मा केन्द्रित रहन सक्छौं र हामी यी कठिन समयमा मानिसहरूलाई समर्थन गर्न सक्छौं।
तपाईको टोली सदस्यहरूसँग नियमित रूपमा एउटा बैठकमा सँगसँगै हुनुहोस् शाब्दिक वा सामाजिक दूर अफिसमा टोलीका सदस्यहरूसँग भेट्ने क्रमबद्ध क्यालेन्डर आईटम लिएर यसले स्थिरता र केहि सदस्यहरू 'निर्भर' गर्न सक्ने कुरा प्रदर्शन गर्दछ।
एउटा बैठकमा टिम सदस्यको भलाईलाई केन्द्रित गर्दछ। सोध्नुहोस् "तपाईं कसरी व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुबै गरिरहनुभएको छ?"। तपाइँको कम्पनी मा छ दिन को छुट लिने, कर्मचारी सहायता वा तपाइँको कम्पनीले कर्मचारी भलाई को लागी प्रदान गरीएको अन्य कुनै पनि स्रोतहरु मा पुग्न को रूप मा तपाइँको कम्पनी छ को संसाधन को याद दिलाउनुहोस्। कार्यकर्ताको भलाईमा ध्यान केन्द्रित गरेर तपाईं एक नेताको रूपमा प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईंले ख्याल गर्नुहुन्छ र तपाईं एक विश्वसनीय स्रोत हुनुहुन्छ।
जडान बढाउनुहोस् यदि धेरै जसो टोली टाढाबाट काम गर्दैछन्। धेरै कामदारहरू धेरै हराइरहेका छन् वा अफिसको क्यामेराडीमा छुटेका छन्। रिमोट टोलीहरूले नेताहरूलाई नियमित रूपमा र जूम वा स्काइप वा अन्य भिडियो प्रणालीहरू मार्फत सम्पर्कमा रहन आवश्यक गर्दछ।
धेरै कम्पनीहरूमा गएका छन् वा एक 'हाइब्रिड' कार्य मोडलमा। हाम्रा ग्राहकहरू टाढाको काम र कार्यालय योजनाहरूमा घुमाउने तालिकाको साथ निर्माण गर्दैछ। कोविड दिशानिर्देशहरू सामाजिक दूरी सुनिश्चित गर्नका लागि छन् जसको मतलब धेरै कम्पनीहरूमा अफिसमा office०% कार्यबल हुन्छ र %०% दूर आधारमा रेटिंगको आधारमा कार्य गर्दछ।
अधिक तिर शिफ्ट संग टाढाको काम नयाँ सामान्य को रूप मा अपेक्षा, लक्ष्य, रिपोर्टिंग र प्रदर्शन को ट्र्याकिंग को बारे मा धेरै स्पष्ट संचार को लागी एक वृद्धि आवश्यकता छ। नेताहरू जुन मैले फेला पारेको अहिले एकदमै निराश छन् ती हुन् जसले KPI को वरिपरि स्पष्ट मापदण्डहरू सेट गरेनन् वा टाढाका कामदारहरूको लागि प्रदर्शन नाप। भर्खर हामीले हामीले एउटा ग्राहकलाई उनको टोली सदस्यहरूलाई कोच गर्न मद्दत गर्‍यौं जुन संख्याको मूल्य निर्धारण गर्न र महामारीको तुलनामा उच्च स्तरमा ट्र्याकि। गर्न।
लगानी समय कोचिंग, प्रशिक्षण र तपाइँका कामदारहरूको लागि विकास। कामदारहरूलाई प्रत्येक दिनको एक हिस्सा खर्च गर्न सिकाउनुहोस् र उनीहरूले रुचि राख्ने क्षेत्रमा दक्षता सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्। प्रत्येक कामदारका लागि स्पष्ट विकास योजनाहरू निर्माण गर्नुहोस् जुन उनीहरूलाई बढाउन र सिक्नको लागि सीप विकासको रोडम्याप प्रदान गर्दछ।
एक नेता को रूप मा तपाईं संग कुनै सीमित विश्वास को लागी जान दिनुहोस् कि तपाईंको कार्यकर्ताहरू 'वास्तवमै' काम गर्दै छन् कि हो। अर्को शब्दमा नेताहरूले आफ्नो टीमका सदस्यहरूलाई 'विश्वास' गर्न आवश्यक छ। एक ग्राहकले मेरो साथ एक अनुसूचित कोच कलको अवधिमा साझेदारी गर्यो कि उनले स्पष्ट रूपमा उनको टोलीमा 'नम्बरहरू' व्यक्त गरेकी छिन र उनीहरूलाई भनेकीन् कि जबसम्म उनीहरू परिणाममा केन्द्रित हुन्छन् उनी कसरी 'उनीसँग' संलग्न हुँदैनन् उनीहरू कसरी ती नतीजाहरू प्राप्त गर्छन्। हामीले यसका साथ केही महिना काम गर्यौं कि उनले 'विश्वास' मा सled्घर्ष गर्दा कि वास्तवमा काम सकिएको थियो। किनभने तिनी नम्बरहरू ट्र्याक गर्न सक्षम भएकी थिइनन् कि उनले नम्बरहरूमा 'विश्वास' गर्न सक्थे र त्यसकारण उनको टीमका सदस्यहरूलाई विश्वास गर्न सक्छन्।
जब तपाईं एक नेताको रूपमा निराश महसुस गर्नुहुन्छ वा तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं संघर्ष गरिरहनु भएको छ तपाईंको आफ्नै तनाव स्तरहरू हेर्नुहोस्। के तपाईं आफैंमा रिसोर्स गर्दै हुनुहुन्छ र आफैंमा समय लिएर आफूलाई पेस गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईं टीम प्रतिक्रिया र / वा सजिलै ट्रिगर भैरहेको प्रतिक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं आफ्नो नेताबाट समर्थन / सल्लाहकार प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं एक राम्रो नेता बन्ने बारेमा बढी सिक्न मा केन्द्रित हुनुहुन्छ? तपाईंको टोलीलाई समर्थन गर्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईको आत्म-देखभाललाई मोडेल गर्नु हो, यस जटिल समयमा मोडेललाई मोडेल बनाउनु हो र मोडेललाई लचिलो बनाउनु हो।
परिवर्तनको नेतृत्व कसरी गर्ने, आविष्कार गर्ने र आकर्षण गर्ने र ब्यक्ति बनाउनको लागि कसरी थप स्रोतहरू पहुँच गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो अनलाइन पाठ्यक्रमहरू जाँच गर्नुहोस् र एक नि: शुल्क कोर्समा पहुँचको हाम्रो सीमित समय प्रस्ताव।